musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Zimbabwe Breaking News » Guam isina Korea Vashanyi ikozvino nhoroondo
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Zimbabwe Breaking News • nhau • ushanyi • kutakura
Nhasi, Guam yakagamuchira zvakare vashanyi mangwanani-ngwanani eKorea Mhepo ndege, vachimaka vakatambira kutangazve kufamba.
The Guam Vashanyi Bureau (GVB) uye AB Won Pat International Airport Authority (GIAA) vakagamuchira kutanga kwavo kutangazve kubhururuka kubva kuKorea Air mangwanani ano.
Ndege yeB777-300 yakasvika ichibva Incheon iine 82 vafambi vari mungarava.
Korean Air yatanga basa revhiki nevhiki zvakare kuGuam kubvira kutanga kwechirwere cheCOVID-19.
“Tinofara kugamuchira zvakare Korean Air uye tinovatenda nekuzvipira kuGuam zvakare. Kunyange gore rino nehafu rapfuura ranga richinetsa munhu wese, zvinofadza kuona mwenje pakupera kwetonji uchiwedzera kupenya, ”akadaro Dr. Gerry Perez, Mutevedzeri weMutungamiri weGVB. "Tinotarisira kushanda nevazhinji vevateereri vedu uye vatengesi vezvekufambisa kusimudzira indasitiri yekushanya yeGuam."
T'way yakatanga zvakare basa remhepo nguva yaChikunguru 31 uye yakaunza vafambi makumi mashanu nevashanu kuGuam. Jin Air zvakare yakawedzera sevhisi yayo yemhepo kusvika kaviri pasvondo, iyo inotanga nhasi na52: 2 pm Jin Air ndiyo yega yekutakura-yekuKorea yakagara ichiita sevhisi yemhepo nguva dzose mudenda iri.
GVB iri kuenderera mberi nekuita kwaziso dzekuuya kuti dzigamuchire dzese dzinotangazve nendege. Ndege dzakabatanidzwa dzinofungidzirwa kupa zvigaro zvinofungidzirwa zviuru zvitatu nemazana matatu nemakumi matatu neshanu neGuam kusvika kupera kwaNyamavhuvhu.
Mazuva 4 chete apfuura Tway akatanga kushanda pakati peKorea neGuam.